Toeram-pidiovana, fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena, tampon-trano fidiovana plastika - Haorui
Fanatanjahan-tena sy fahasalamana
Indoor sy ivelany
Efa ho 20 taona izao, ny HAORUI dia mitazona fiaraha-miasa maharitra amin'ny fivarotana lehibe any Eropa, toa ny LIDL, ALDI, EDEKA, NORMA, NETTO, ROSSMANN sns. antoka. Ankehitriny, ny HAORUI dia mifampiraharaha amin'ny vondrona vokatra telo lehibe - Fitaovana amin'ny fandroana, vokatra ara-panatanjahantena & ara-pahasalamana, kilalao hazo.
Avereno ny fiainanao
Manomboka eto ny andro mahafinaritra. Ny kojakoja fandroana isan-karazany dia hahatonga ny trano fidiovana ho madio kokoa sy mety kokoa. Ny fitaovana sy ny endriny samihafa dia mampiseho ny toetranao manokana. Tapitra eto ny andro iray be asa. Ny kalitao azo itokisana dia ny fanoloran-tenantsika tsy miova. Ny fisehoana tsara tarehy sy ny fahatsapana vokatra dia manatsara ny toetranao. Miala sasatra amin'izao fotoana izao azafady.
Tandremo ny ainao
Manomboka amin'ny fampiasana isan'andro hatramin'ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena sy fampiasana ara-pahasalamana, ny ekipanay dia afaka manolotra endrika mifototra amin'ny tena fitakiana hetsika isan-karazany sy amin'ny fampiasana tanjona: Fiarovana ara-panatanjahantena ho an'ny faritra samihafa amin'ny vatana, tanany ho an'ny hafanana sy faneriterena, lamba sy kofehy miasa ary manome kofehy manokana, tongotra fikarakarana, fitsaboana amin'ny hatsiaka & hafanana, Orthopedics ary fanampiana ara-pahasalamana ... Ataovy malalaka ny safidinao, ary eo an-damosinao izahay.
Hararaoty ny fiainanao
Ny kilalao hazo dia manolotra ny ankizy takelaka banga iray hahafahan'izy ireo mamolavola ny ala sy ny fihoaram-pefy amin'ny fisaintsainany mivaingana; Ny kilalao hazo dia afaka mampiroborobo ny fifandraisana amin'ny ankizy hafa ary mampiroborobo ny fizarana sy ny fiaraha-miasa; Ny kilalao hazo koa dia mampifandray mivantana amin'ny tontolo voajanahary ho an'ny ankizy ... Ny kilalao hazo maroloko rehetra dia mety hampanan-karena ny fiainanao sy ny fianakavianao.
Ny tombotsoan'i Hebei Haorui
Ireto misy antony vitsivitsy hisafidiananao an'i Hebei Haorui
Mampiasà fanavaozana amin'ny asa sy fanahafana maro samihafa mifototra amin'ny tena tinian'ny mpanjifa tsirairay.
Ampiasao ny dingana rehetra amin'ny baiko iray manontolo manomboka amin'ny fangatahana ka hatramin'ny fampidirana kaontenera. Manolora serivisy feno sy voafaritra ho an'ny mpanjifa.
Mianara bebe kokoa momba ny HAORUI
Diniho sy arahi-maso ny fizotry ny famokarana iray manontolo, alao antoka fa ny entana aterina amin'ny toe-javatra tsara indrindra.
HAORUI dia manana mari-pankasitrahana feno sy rafitra fitantanana fanandramana, miara-miasa amin'ireo mpivady andrim-panjakan'ny antoko faha-3 sy SGS, BV, Hohenstein, TUV, Intertek sns. miaraka amin'ny BSCI, SEDEX, ISO, FDA ary Oeko-tex, GS, CE, PEFC, mari-pankasitrahana FSC azo alaina, ny fiantohana kalitao no filozofian'i Haorui ho an'ny orinasa rehetra.